Iwo akanakisa kugoverwa kweLinux kwa2015 | Linux Vakapindwa muropa
Kugadziriswa kweakanakisa GNU / Linux kugovera kwe2015
Isaac | | Updated on 24/09/2015 14:28 | Kugoverwa, GNU/Linux
MuLxA isu tanga tichida Kudzokorora la kuenzanisa kweGNU / Linux kugovera kweiyo 2015, Nedzimwe nhau dzinonakidza nekuda kwekukwira kwemapurojekiti matsva anovimbisa atinoda kuwedzera pane izvo zvinyorwa. Saka iwe unogona kuve nerondedzero iyo ichakubatsira iwe kusarudza yako distro kubva kune yakakura mhando iripo.
Kunyange zvakadaro yakanakisa distro Iyo yaunogona kusarudza ndiyo iyo yaunonzwa kugadzikana zvakanyanya nayo, urwu chete runyorwa rwevasina chokwadi kana avo vachangosvika muLinux nyika. Kuravira mavara ... Kunze kwezvo, ivo havazi vese, kure nazvo uye haufanire kutarisisa zvakanyanya kune iyo rondedzero. Ndeipi yaunosarudza? Pano isu tinosanganisira mamwe akanyorwa muzvikamu zvinoenderana nezvaunoda.
2 Kugovera kwechiedza:
3 Kugoverwa kwemakambani:
4 Kugoverwa kwekuvanzika kwako:
5 Kugoverwa kwekuchengetedza:
6 Kugoverwa kwemitambo:
7 Kugoverwa kwevakaremara:
8 Distrubuciones yevana:
9 Kugoverwa kweRaspberry Pi:
Ubuntu: Canonical yakagadzira imwe yeakanakisa kugoverwa kweLinux kunze uko, kana zvirinani inonyanya kufarirwa uye yakapararira yezvose. Ehezve ivo vakanganisa uye havazi vese vanofarira Ubuntu, kana pane Ubuntu haisiriyo yakanakisa distro kune iyo bhodhi. Asi zvirokwazvo chirongwa chinotyisa chinogona kugutsa vashandisi vazhinji. Ehezve iwe unogona kusarudza pakati penzvimbo dzakasiyana dzedesktop: Kubuntu, Lubuntu, Xubuntu, ... kana kugara neUbuntu nekubatana kwayo.
openSuSE: Icho chimwe cheakakura uye enhoroondo, uye nekuda kwechikonzero icho chinofanira kuoneka mukuenzanisa kwese. Iko kugovera kwakanaka, kwakasimba uye kufanana neBuntu, ine rutsigiro rwakawanda. SuSE uye AMD zviri kuseri kwekusimudzira nekugadzirisa, izvo zvinotsigirwa neaya maindasitiri anorema.
yekutangaOS: Iyo yakavakirwa paUbuntu uye nokudaro inogara nhaka yeimwe yehunhu hwayo, asi inomira kunze kune yayo Pantheon desktop nharaunda, iyo inoedza kuteedzera kuoneka uye kupfava kweApple's Mac OS X inoshanda sisitimu. Pari zvino ndiyo yekushambadzira kwechisere inoshandiswa zvakanyanya.
Debian: Iyo ndeimwe yeakakura pasina kupokana, uye pane mamwe akawanda akavakirwa, senge Ubuntu. Mushure mekuvandudzwa kwekugoverwa uku kune nharaunda yakakura, saka iwe uchagara uchitsvaga mhinduro uye zvinyorwa pamambure kugadzirisa matambudziko. Iyo inokodzera kutaurwa kwakakosha, kune kukosha kwayo.
ArchLinux: Ichokwadi inonzwika senge iwewo, sezvo iri imwe yeakakurumbira. Imwe neimwe yadzo ine zvayakanakira nezvayakaipira, uye Arch haina anosara. Kureruka, kubatana kwekodhi uye minimalism ndidzo dzimwe mbiru dzavakanangana nedzidziso yavo yekusimudzira. Kugadzikana kwayo, rusununguko rwekusarudza uye mikana yekuzvigadzirisa inogona kukwezva. Kupesana nayo ine izvo pamwe chete neGentoo kana Slackware, iri distro isina kukodzera ma newbies nekuti inonetsa kushandisa.
Chrome OS: Iyo distro yeGoogle, yakapusa, yakajeka, yakashongedzwa, yakachengeteka uye inogamuchirwa kwazvo, sezvo Chromebook iri chigadzirwa chenyeredzi chakasvika munzvimbo dzakakwirira dzekutengesa pane saiti seAmazon uye yatengeswa kunze kakawanda nekuda kwekuda kwayo. Iyo inoshanda sisitimu yakagadzirirwa gore, iine hombe app chitoro uye yakavakirwa paGoogle Chrome browser, sezvatinogona kufungidzira.
Linux Mint: Iyo distro yakavakirwa paDebian uye vagadziri vayo vakaisa kusimbisa pane kupusa kwekushandisa (usability) uye nyore kwekumisikidza, izvo zvinoita kuti ive kugoverwa kwakanaka kana iwe uchiri usina ruzivo rwakanyanya kwazvo rwenyika. Iwe unowana akawanda mapakeji ekugovera uku uye iwe uchawana yakagadzikana sisitimu maunogona kunakidzwa nekushanda pasina matambudziko.
ShandukaOS: iko kugovera kutsva uko vagadziri vanga vachida kutarisisa pane dhizaini uye minimalism yenzvimbo yavo yedesktop, sezvo zvinoita kunge iri fashoni nhasi Ikey Doherty iri kuseri kweprojekti, chirongwa chakagadzirwa kubva pakutanga neyakareruka graphical interface. EvolveOS iri kuvhura mukaha pakati pevamwe, senge Linux Deepin uye elementaryOS nekuda kwekugadzirwa kwayo ...
fedora: Icho chimwe chezvakanaka, kunyangwe vamwe vakachinja zvishoma nezvishoma, hatifanire kukanganwa chirongwa ichi chinobva kuRed Hat, seyakavhurikaSUSE kubva kuSUSE. Zvakare, kune avo vanoda RPM mapakeji, senge openSUSE uye kusiyana neese ayo akavakirwa paDebian kana Ubuntu, ivo havashandise DEB mapakeji. Ini ndinodzokorora, iyi ingori nyaya yekuravira ...
Korra: Iyo Fedora-yakavakirwa kugovera, asi ine zvimwe zvekuwedzera izvo vazhinji vashandisi vanogona kukoshesa. Inogona kuve yakanaka distro ye newbies, uye ine huwandu hukuru hwezvishandiso, madhiri eimba, uye multimedia codecs saka hauna dambudziko mune izvi.
KaOS: aesthetics, runako uye kudekara ndiwo matatu anokodzera anotsanangura KaOS zvakanaka. Iyo yakazvarwa kubva kunogadzira Anke Boersma, mumwe wevaChakra Linux programmers, imwe distro yatakataura nezvayo pane yedu blog. Iyo yakavakirwa pa KDE uye yakagadziridzwa kune maapplication ayo akavakirwa paQt, izvi zvinogona kuve mukana kana kusarongeka kukuru kana usingakwanise kuisa mamwe mapakeji esoftware akavakirwa paGtk.
maokoro: Iyo yakavakirwa paArch Linux uye inoshandisa Xfce senzvimbo yayo yedesktop, ichiiita iyo isina kureruka distro. Kunyangwe iyo yakavakirwa paArch, Manjaro ine yayo epamoyo software uye vagadziri vayo vakafunga zvakanyanya nezve kuita kuti ive inoshandisa-nharaunda nharaunda uye vakaita kuti zvinhu zvive nyore kwazvo kwazviri.
Mashiripiti Yakazvarwa seforogo yeMandriva, uye vagadziri vacho vaimbove vashandi vaive muboka rekuvandudza reiyi inozivikanwa distro. Mandriva sekuziva kwako parizvino chirongwa chakasiiwa, chakamiswa, saka Mageia inogona kunge iri imwe yakanaka.
Lubuntu: ndeimwe yemhando dzepamutemo dzeUbuntu dzine LXDE desktop nharaunda, saka zviri nyore. Nekudaro, mwenje hausi zita risingafadzi, nekuti naro unogona kuita zvese izvo Ubuntu zvinokutendera kuti uite, asi kuti hongu, kusiyana neyekupedzisira, unogona kuiisa pakombuta ine zviwanikwa zvishoma uye kuti zvinofamba mushe.
Inopenya: Iyo yakavakirwa paDebian uye ndeye inokurumidza uye isina huremu distro iyo inogona kuiswa pane yakaderera-zviwanikwa makomputa, ekare kana anotakurika. Inowanikwa nemhando dzakasiyana dzakareruka pakombuta yekushandisa zvishoma zviwanikwa, zvakadai se: Chiedza, JWM, KDE, LXDE, LXQt, MATE, Openbox uye Xfce.
Bodhi: Iyo yakavakirwa paUbuntu uye inoshandisa isingaremi Enlightenment desktop nharaunda. Iyo zvakare ine vatyairi vechinyakare Hardware uye inogona kuve yakanaka mubatsiri kumutsidzira imwe yeaya ekare makomputa aunayo kumba kana kuiisa mune chero imwe iyo ine mashoma zviwanikwa.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve kureruka kugovera, unogona kubvunza yedu chinyorwa pamusoro penyaya iyi.
SLES (SUSE Linux Enterprise Server): SUSE inoisa zviwanikwa zvakawanda kukudziridza nharaunda yakagadzikana ine huwandu hwakawanda hwetsva dzakagadzirirwa makambani. SLES pamwechete neRHEL, ndiwo maviri akakosha zvikuru kugoverwa kwemaseva ebhizinesi kana supercomputer iwe aunogona kuwana pamusika. Mukudzoka, iwe unofanirwa kubhadhara mari kwavari, nekuti ivo havana mahara. Asi ivo vakazara kwazvo uye zviriko zviripo ...
RHEL (Red Hat Enterprise Linux): RHEL ndiye anokwikwidza mukwikwidzi weSLES kana SLES ndiye akaomesesa weRHEL zvichienderana nekuti unozvitarisa sei. Kugoverwa kwese kwakagadzirirwa chikamu chimwe chete, bhizinesi chikamu. Uye zvakare, ese ari maviri akavakirwa paRPM mapakeji uye akatsiga zvakanyanya uye ane yakawanda mhinduro kumakambani, senge yekusimbisa pakuona uye zvimwe zvinonakidza maturusi.
Kana iwe ukashanda neLinux-based system kana uchifunga kudaro, unogona kubvunza chinyorwa chedu pane kugoverwa maererano nebasa rako.
Kugoverwa kwekuvanzika kwako:
Whonix: Izvo ndezve avo vane hanya nekuchengetedzeka uye kuvanzika, pamwe nekuparadzirwa uku haufanire kunge uine matambudziko akawandisa mune izvi, sezvo iine zvimiro zvinoenderana nemuchina chaiwo kuitira kuti maapplication asaise dambudziko kana kubhurawuza kwako internet kwakachengeteka sezvinobvira .
Miswe: Iyo inozivikanwa distro iyo yatakatotaura nezvayo pablog. Yayo huru uzivi ndeyekuve distro inoremekedza zvakavanzika zvako uye kusazivikanwa pamambure, nekuti zvakachengeteka chaizvo uye kana iwe uine iyo yakagadziridzwa, iwe uchave unokwanisa kuverenga pane yakachengeteka nharaunda uye isina kubva kwakawanda kurwiswa.
KaliLinux: Kana iwe wakatsaurirwa kuchengetedzwa kwemakomputa, Kali Linux igovaniswa huru, iine maturusi asingagumi ekugura nekuchengetedza ongororo. Zviri pasina mubvunzo inonyanya kuzivikanwa uye yakanakisa.
Santoko: Asi kana iwe uchida kugoverwa kwakati wandei mune ekuchengetedzwa kunoongororwa kwakanangana nemidziyo yenhare, unogona kutarisira kuti ive nematurusi akasiyana siyana, mazhinji zvakare anowanikwa muKali, asi yakatarwa Santoku rondedzero yemhando iyi yemidziyo uye bvunzo.
KUKUNDA: pamwe chete neSantoku neKali Linux inogona kuva mukwanisi akakwana wekuchengetedza. Iko kugovera uko, senge zvakapfuura, kune zvirongwa zvakawanda zveongororo yekuongorora.
SteamOS: Valve yanga iri vhidhiyo yemakambani kambani iyo yakaitira zvakawanda nyika yevaraidzo paGNU / Linux, uye yakatotipa isu mamwe mapurojekiti makuru anoshandisa Linux sehwaro. Isu tinomuzivawo zvakanaka kubva kuchitoro cheStam. Asi nguva pfupi yadarika isu tinofanirwa kuwedzera kune iyo runyorwa rwezvinhu zvekugadzira kugovera kwakanangana nemitambo yemavhidhiyo, iyo yaunogona kunakidzwa nekugadzirisa kwayo kwemakadhi emifananidzo emazuva ano uye maturusi awo.
Ozon OS: Kunyangwe zvingaite senge generic distro uye yakafanana nedzimwe dzakaongororwa kare, izvo zvakadzvanya dhizaini uye minimalism yeiyo interface, inogona zvakare kuonekwa sedistro yakanaka kune avo vanoda mitambo yemavhidhiyo. Vagadziri vakagadziridza iyi distro yemitambo, vachiwedzera vatongi vema graph uye mapuratifomu emitambo yemavhidhiyo.
HOPE: Zvichienderana neManjaro, iyo yakaremara-yakatarisana distro, ine maturusi kune avo vane chiono nemamwe matambudziko. Semuenzaniso, ine skrini yekuverenga, girazi rinokudza kuti riwedzere nzvimbo dzechidzitiro, i-on-screen keyboard kune avo vane matambudziko ekufambisa, akakosha mafonti kune vanhu vane dyslexia, nezvimwe.
Vinux: yakavakirwa paUbuntu uye yakanyanya kugadzirirwa vanhu vari mapofu kana vakaona zvisirizvo zvemhando ipi neipi. Pamusoro pekukudza magirazi uye kuverenga mameseji, VInux zvakare ine dzimwe sarudzo dzinobatsira, senge rutsigiro rweBraille kuratidza.
Shuga: distro yevana kuti vadzidze. Sezvakagoverwa kune vakwegura, kune mamwe akawanda evana. Iwo anonyanya kuzivikanwa ndiEdubuntu, Qimo, Linux Kidx, DouDouLinux, nezvimwe. Asi isu takasarudza izvi se zvitsva, zvisinganyanyozivikanwa kuwanikwa zvinokodzera kuzivikanwa.
Kugoverwa kweRaspberry Pi:
Snappy Ubuntu Core: Canonical's new distro yakazvicherera gomba hombe pachayo kunyangwe iri nyowani. Saka Snappy anozove shamwari yakanaka kune yako Raspberry Pi, nezvose iwe unokwanisa kugadzira kuwanda kwemapurojekiti uye kudzidza zvakawanda.
Raspberry OS: Raspbian OS ndiyo Raspi distro par kugona, saka haigone kusiiwa kunze. Iyo yakavakirwa paDebian yeARM uye ndeimwe yeanovimbisa uye akatsigirwa mapurojekiti ebudiriro SBC bhodhi.
OSMC: Kana izvo zvaunoda kushandura Raspberry yako Pi kuti ive yechokwadi multimedia centre, une zvakawanda sarudzo, senge OpenElec pakati pevamwe, asi yedu yakasarudzwa iOSMC. Nayo iwe unenge uine chikuva chakakura chemafoto, mavhidhiyo, mimhanzi, uye network zvemukati paTV yako kana chero kwaunoda.
Usakahadzika siya zvaunotaura (kushoropodza, kuvonga kana mazano) ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Kugadziriswa kweakanakisa GNU / Linux kugovera kwe2015
Victor john akadaro
zvinoshamisa, zvinoshamisa !! Kunyangwe ndichikundikana nemazwi, chokwadi chakanakisa post !! chinhu chega chinopusa asi hei ivo vakasvetuka iyo debian chifananidzo, vakaisa arch chifananidzo munzvimbo yayo uye ipapo anotevera mifananidzo ese aive asiri iwo xD
nakidzwa nekuiverenga uye zvakawanda!
Pindura kuna victor juan
Ini ndinofunga slackware inofanirwa kunge iri pane iyo runyorwa pamusoro pevamwe vakataura
Pindura kuna javier
Roberto Ramirez akadaro
Ini ndinodawo Slackware, iro dambudziko chete nderekuti haina kuvandudzwa, paive nenguva apo mushure mevhezheni 14 ivo vaizoikanzura nekuda kwehutano hwaPatrick Volkerding, asi vakaburitsa 14.1 asi haina kuvandudzwa kweanopfuura makore maviri kufamba uye izvo zvinokanganisa kufarirwa kwedistro.
Pindura kuna Roberto Ramírez
Francisco Rojas Jorquera akadaro
Inoshamisa kushambadza kwako uye hunhu hwakanyatsotaurwa neumwe neumwe wedistros, makorokoto, kwaziso.
Pindura kuna Francisco Rojas Jorquera
Zvakanaka, ini ndaedza mazhinji eawo awasarudza asi ini ndinosarudza PCLinuxOS uye antiX.
Salix zvakare inoita kunge yakasarudzika kwandiri.
Ndine urombo kusabvumirana newe.
Kana iwe usingavazive, unofanira kuzviedza.
Pindura kuna Aleph
Ndinobvumirana newe…. Ndakaedza zvimwe zvataurwa, asi ndinonamira nePCLinuxOS. Izvo zvandakashandisa kwemakore mazhinji.
Pakutanga ini ndakakurudzirwa kuyedza AntiX, ngatitii ndiri mushandisi ane ruzivo rwushoma rwandakashandisa Fedora, Debian uye Ubuntu. Hunhu hupi kana hunhu hwandingawane muAntiX?
Ndatenda zvikuru nemupiro uyu. Ini ndanga ndichitsvaga distro yeyakare laptop ine Windows XP uye apa ndawana Sparky, ndaida. Kwaziso kubva kuGuatemala !!!
Korora, chimwe chinhu senge "Linux Mint" yeFedora, ine zvakawanda zvakagadziridzwa uye zvinowedzerwa, kunyangwe aine akati wandei bugs akagadziriswa; Iyo inozivikanwa distro yekuita kwayo kwakanaka. Ndatenda vanhu neiyi positi inonakidza.
Chinyorwa chakanaka shamwari, asi chokwadi chekuti mukuchengeteka chaizoisa Wifislax muchinzvimbo 2 mukuchengeteka
Pindura kuna azpe
Raspbian + KODI recipe akadaro
Raspbian inogona kushandiswa senzvimbo yemultimedia nekuisa tax uye saka une rasipiberi pi ine mukana wekuzvibata senzvimbo yemultimedia kana komputa yekufamba zvinoenderana nekureruka kwechinguva, inogona kutomisikidzwa kuitira kuti ibude to tax kana tisingataure chero chinhu kwazviri kwenguva.
Pindura Raspbian + KODI recipe
Inonakidza kwazvo, ruzivo rwacho rwakanyanya kunaka, ndiri mudzidzisi wemasvomhu uye ndiri kufarira kuchinjira kuLinux, asi pane zvakawanda zvingasarudzwa. Iwe unogona here kuratidza chero kugoverwa kunogona kubatsira kwandiri nyore kushandisa?
Ndinokutendai zvikuru nekucherechedza kwenyu uye rubatsiro rwamunogona kundipa.
Pindura kuna Alfredo
Mhoro Alfredo! Kana iwe uchida kuchinjira kune linux, kuitira nyore uye runako, ini ndinokurudzira linux mint, nharaunda yakavhurika kwazvo kumibvunzo uye iwe unogona kubvunza chero paforamu kana pa IRC. Asi sezvo iri zvakare mudzidzisi, ndinokurudzira kuti uongorore UberStudent, nekutadza inouya nemidziyo yakawanda yekudzidza uye kutsigira kudzidzisa, kuwedzera pakuve nyore kushandisa.
Pindura kuna Erian
Ndatenda zvikuru Erian, kurodha pasi….
jonathan posada akadaro
Unogona kutanga ne ubuntu (y)
Pindura kuna Jonathan Posada
Math Zvirongwa akadaro
Kupfuura distro, zvingave zvakakosha chero eakareruka: Lubuntu, Mint, nezvimwe ... kana izvo zvakanangana nedzidzo kana munda wako senge Guadalinex Edu mugari wemagazini kana Scientific Linux ini ndinokupa zano iwe zvirongwa senge octave, PSPP, LO math, LO calc, nezvimwe…
Pindura kuMathematics Zvirongwa
Ndatenda zvikuru nemazano enyu, ndiri kuenda kuongorora nezvazvo, zvinondiunzira mufaro wekupinda mune ino nyowani yekushandisa system uye pamusoro pazvose kushandisa nyowani uye mamwe maturusi maturu kune iwo eWindows.
Ignacio Agullo akadaro
Chinyorwa ichi chinopa ruzivo rwakakosha, asi chine chikanganiso chakajeka: Chrome OS haisi "Google's distro", nekuti haisi pakati pe "GNU / Linux distributions" iyo ino inoedza kufukidza ichi chinyorwa. Chrome OS ndiyo yakasarudzika sisitimu inoshanda kubva kuGNU / Linux.
Pindura kuna Ignacio Agulló
Ndinokutendai kutanga. Yechipiri, iyo inoshanda sisitimu vs distro imwe nyaya inogadzira gakava. Asi ini ndinokukoka iwe kuti uverenge iyo dudziro yekugovera uye wozondiudza kana ndiri kutaura chokwadi kana kuti kwete:
Louis gomez akadaro
Mhoroi, yakanakisa chinyorwa, asi ini ndinofunga ndinofanira kushandura "VAKAremara" kuita "ZVAKASIYANA ZVINOGONESESA", izvi kuti zvirege kukuvadza kunzwisisika.
Pindura kuna Luis Gomez
Kana ndatadzira mumwe munhu, ndinokumbira ruregerero. Chinangwa hachisi icho, asi chakapesana. Ipa vanhu ava ruzivo rwekuti pane masystem akagadzirirwa ivo.
Ndinoziva kuti mazwi akaremara, akaremara neakaremara haana kufanana uye anomutsa makakatanwa… Asi ndinotenda kuti hupofu, semuenzaniso, hurema.
Nekudaro, mushure mekuverenga izvi hazvisi pachena uye mune chero chiitiko igwaro rinobata chete Mexico:
PS: Ini ndinofunga bofu rinogona kufarisisa kuve neuto revasayendisiti vachiongorora maitiro ekudzoreredza kuona kwake kupfuura yemauto evatungamiriri vanodzivirira mazwi akakwana.
Ini handifunge kuti unofanirwa kukumbira ruregerero pane chero chinhu, kana mumwe munhu achifunga kuti chirevo chingagumbura, mhosva iri maari, kwete mune yako
kugona kwakasiyana? enda zvisina musoro
Mhoro ini ndoda kuziva kuti ndeupi kugoverwa kweLinux kwandinogona kuisa sezvo ini ndisiri kutonga chero nharaunda ye linux, ma windows chete aunokurudzira?
Pindura kune maronda
Mario dannan akadaro
Mhoro Ulices! Ndiri Mario Dannan, ndiri zvakare Linux newbie; Ini ndinokukoka iwe kuti uverenge chirevo changu pazasi.
Kugamuchirwa uye kubudirira mune zvese.
Pindura kuna Mario Dannan
Mhoro Mario. Zvakaitika kwandiri zvinoti shamwari yepamusorosoro yeiyo distros ndeye LINUX MINT kana UBUNTU.
Pindura kuna tatatitan
Centos naElastix vanoshaikwa :)
Kune vamwe VoIP runhare
Chinyorwa chakanaka, kunyange hazvo kuravira kwangu chimwe chikamu chisipo:
10 Multimedia Kugoverwa
KXStudio, AVLinux kana Musix, mimwe yemienzaniso yekuparadzira iyo yakagadzirirwa kushanda neodhiyo munguva chaiyo, kuwedzera kune vhidhiyo uye mapurogiramu ezvifananidzo.
Mune iyo distros yeRasberry Pi, OpenElec (Bhutsu naKo zvakananga) uye Lakka kune vanoda emulators uye retro.
Wilmer medina akadaro
Rondedzero yako inonakidza, ndinofunga inoda kusanganisira mwenje kugovera kweNew Zealand mavambo, akavakirwa paUbuntu LTS uye iine Xfce desktop nharaunda, yakanaka kwazvo kumakomputa akareruka, inonzi linux https://www.linuxliteos.com/. Parizvino ndinoishandisa mune mini notibhuku acer inoshuva imwe, iine 1 Gb ye RAM. Kugoverwa uku kwakanditendera kuti ndipe kushandisa chaiko palaptop yangu sezvo kugoverwa kwakasiyana kwandakaedza kwaive kwakanyanya kugona kana kurema kwazvo.
Pindura Wilmer Medina
Roger reynoso akadaro
Ndinoona kuti mune chinzvimbo ichi ivo vakakanganwa Deepin, iyo Chinese distro yandiri kushandisa parizvino uye kuti haifanire kuchiva chero eerimwe distros ataurwa pano. Kana iwe uchida kuziva zvandiri kureva, zviedze uye iwe uchatitaurira iwe zvaunofunga nezvazvo. Chinhu chakakosha, kunyangwe iri China, inogona kushandiswa muchiSpanish kana Chirungu, kana uchida.
Pindura Roger Reynoso
Ndiri naRoger, ndasuwa Deepin. Ndiri kuishandisa uye yakanaka. Ini ndiri mushandisi weLinux wepamberi asi zvinongoita kunge zvinofadza maererano nekuchengetedza, kusimba uye kureruka. Ini ndinoshanda semupurogiramu uye iye anondipa maturusi, uye ini ndoda kutamba uye iye anondipa iyo yakazara vhezheni yeCrossOver mahara, ini handigone kukumbira zvimwe.
Pindura kuna lordmiaux
Raphael Linux akadaro
Kutenda nekutumira, ndiri kushandisa yakatopenya vhezheni kupfuura Lubuntu, iri LXLE, ndinoifarira zvakanyanya nekuti ndinogona kuishandisa ne laptop kubva kwandabvisa XP uye inoshanda kwandiri. Kwaziwai!
Pindura Rafael Linux
Mhoro Rafael, Lubuntu haasi kureruka?
Utano mhuri !!! Ndiri novice weLinux: ine ruzivo rwakasimba mune yekurapa kurapa asi mashoma mazano e "install-crack-hack", makore maviri apfuura ndakatamira kuOpenSource.
Ndakatanga neUbuntu; mumwedzi yakati wandei ndakatora mukana paLinux Mint Qiana neKDE uye ndanga ndave kutonzwa James Bond: ipapo ndakaedza Chakra Linux, Kaos, OpenSUSE Tumbleweed, Fedora, Arquetype, Netrunner… uye ndakadzokera kuLinux Mint, ndakazofunga iyo Cinnamon desktop.
Vakamanikidza chero kurwa, saka ndakadzidza mimwe mirairo, isa tar.gz mapakeji uye vamwe…. uye pandakakwanisa kuendesa Epson xp211 yangu kubasa ndakatochema ndichifara!
Zvakanaka, zano rangu nerino rondedzero nderekugovana nevatsva zvandinowana pazasi: Kutanga neUbuntu kana Linux Mint, ndiwo akanakisa kutanga nawo muzvinhu zvese: intuitive, kugadzikana, kuchengetwa zvakanaka, zvinongedzo zviri nyore kuisa uye , Mune ruzivo rwangu vanogara pamwe chete neWindows (iyo yandinoramba ndiri palaptop nekuti hongu kana hongu ndinoda kushanda neotocad, asi kunyangwe MS Office ndakaisiya kuLibreOffice).
Linux Mint yakavakirwa paUbuntu, kwete Debian. Ndanzwisisa. Zvinyorwa zvakanaka kwazvo! iyo kubva 2014 yakandishandira zvakanyanya
Kubva 2010 paUbuntu izvozvi ndokutamira kudhibian uye ndinofara uye ndinoshamiswa nekumhanya kwayo kusiyana neBuntu
Mhoroi, ini ndaida iyo yakagadzirirwa iyo Linux Mint inayo. Mumwe munhu anogona kundibatsira kugadzirisa yangu seizvi? Ndezvipi zvinhu zvawakaisa?
Pindura kuna Ale
Ndanga ndichishandisa Linux Debian kwemakore masere, kunyangwe ndaedza akawanda distros, nekuti inotsigira chaizvo distro ini ndakaroora Debian kune ese mashandisirwo ... hazvina basa kuti ndeipi distro yaunofarira zvakanyanya, chokwadi ndechekuti une sarudzo dzakawanda munyika
Janio Carvajal akadaro
Mhoroi munhu wese. Handina kuona kugoverwa kweZorin pano, uko muguta rangu (Maturín nenzvimbo dzakatipoteredza muVenezuela) ndakaita zvinopfuura mazana maviri nemazana mazana maviri nezvikamu pamwe nechikwata changu. Parizvino tiri kuisa Zorin 2500 Lite yemakomputa ane 8.1 MB ye RAM uye kune avo vane 512 MB kana kupfuura ne 1024-bit Zorin 64 Core processor. Sezvo isu tisina Internet, tinoshandisa mapakeji nekuvapfuudza nemaoko kuburikidza neNetwork ine APT server kana kuburikidza ne USB madhiraivha. Ini handidi kuve ndinofinha asi isu takaisa Virtualbox ine Windows XP yemakomputa ese kuti zvive nyore kutama kwevashandisi vatsva uye nekuda kweizvozvo tasvika kune vazhinji vashandisi nemakambani. Sehofisi suite isu tinoshandisa WPS Hofisi, hofisi 9.1 uye Libre Hofisi 2010, ine Chirungu Spanish encyclopedias pakati pevamwe, mazana matatu kana kupfuura mitambo, matatu maInternet mabhurawuza, akati wandei odhiyo nemavhidhiyo edhita, sftp server yekugovana mafaera kubva kuLinux kuenda kuLinux, samba kuLinux kuWindows, uye runyorwa rurefu rwezvirongwa zvekugadzirisa zvese zvinozivikanwa kuburikidza neAccCAD mafaera, PhotoShop mafaera uye Uff, mira kuverenga, ndinofunga unogona kutumidza chimwe chinhu uye tinacho muDhijitro yedu yakagadziridzwa, kuwedzera kune yakafanana neWindows 5. uye anosvika makumi mana emafirimu eHD dzazvino ehuwandu hwe300 GB Kuisirwa neimwe (10) gore garandi. Zvese zvinodhura 40 bolivars mumari yenyika, chimwe chinhu senge maviri (300) madhora ekuUS. Kwaziso kubva kuVenezuela :-)
Pindura Janio Carvajal
peter perez akadaro
Janio Carvajal, marginality yako uye kushomeka kwehunyanzvi kunoita kuti munhu wese anokuverengera atende kuti Venezuela inyika yechitatu yepasi, ndinovavhenekera: Venezuela haina kudaro. Pano vashoma saiye ndivo vashoma. Munyika ino uye mudunhu reMonagas, kana tine Internet, haizove yakanakisa pasirese, asi chimwe chinhu (hurumende yakabira mari muIT). Iwe haufanire kutengesa yako quasi njere mune iyo posvo, izvi ndezve kungotaura nezve ma distros. Kana iwe ukashandisa Zorin kune rako bhizinesi tinokukorokotedza iwe, kana gomo raunobva risina Internet uye maitirwo akaitwa kuburikidza ne USB tinokukorokotedzawo iwe. Kuti iwe unozvirumbidza pamusoro pekupokana kwako paunotaura nezve zvese zvirimo zvepirati zvaunosimudza uye kushayikwa kwako kwezivo yemasvomhu (hausi kuzondiudza izvo pamwe nemadhora angangoita maviri aunoratidza kuti iwe unobhadharisa ivo vanobhadhara kune ese epamhepo software uye mafirimu aunoisa) .Iwe uri munhu asingamiriri nharaunda yeLinux iri kukura munyika medu.
Nenzira, izvo zvaunobhadharisa kugovera kana kuisa hunyanzvi hwako nezvinhu zvine copyright hazvikuite iwe zvakare linuxero, zvinokuita iwe murume wepakati anotonga basa rake, anoba izvo zvevamwe uye anokuvadza musika wevashandi nekuratidza kuti vashandi vemakomputa vanofanira tambira mihoro yevaranda.
Pindura Pedro Perez
Kugona. Ndakaedza akasiyana ma distros asi dambudziko rangu hombe nderekuti ndinoda damn Photoshop, ndosaka ndisina kupedzisa kufamba. Ndinoyeuka ndichiyedza neLinux Mint 12 uye yaitaridzika kunge yakakwana asi ini ndaisada dhizaini, ipapo ini ndakawana Crunchbang ndakafarira dhizaini asi payakaiswa pane diski yainonoka kupfuura zvaimhanya kubva kuUSB. Ndiri kunyatso kuyedza kuenda kuLinux asi ndanga ndichishanda paPhotohop kwemakore mazhinji ikozvino uye handizive kana ndine moyo murefu wekuitsiva neimwe. Mubvunzo wangu uri nyore: pachave nechero distro kana system inogona kuenderana ne Photoshop kana ini ndiri wekunyepedzera? (pc: amd athlon 7750 mbiri musimboti 2.71ghz, 2gb gondohwe)
Pindura kuna Emmanuel
Newaini iwe unogona kuimhanya nyore nyore pane chero munhu. Wakamboedza gimp here?
Ndine zvikamu zvitatu paPC yangu, imwe iine WinDios (ndacheka network, ini handipinde muwebhu, kuitira kuchengeteka), imwe neLinux uye imwe ine Warehouse (kuchengetedza zvinhu zvangu zvidiki).
MuLinux, ini ndinowedzera ekuwedzera ekuwedzera kune browser: Ghostery (inofanira kugadziridzwa) uye HTTPS Kwese.
Ndiri kuita zvakanaka, ndinogona kusarudza chero eesystem, zvichienderana nekuti ndinofanira kushanda neimwe kana zvimwe zvirongwa.
UUmate, Rosa naMangaka (chiJapanese), ini ndangozvishandisa zvakanaka kwazvo.
makore mazhinji apfuura (makore gumi nemaviri approx) ndakaedza kuyedza linux uye zvainge zvakandiomera kudzidza mirairo uye nezvimwe zvakadaro. Ndatenda Mwari GNU / linux nhasi inochinjika uye inoshanda, ndakaedza linux zvakare zvishoma kudarika gore rapfuura, uye ini ndatova linuxero, ndakaedza akati wandei distros Opensuse, zorin, linux mint, korora, nezvimwe ... nguva yakareba ndanga ndiine yekutanga furuya kwerinenge gore - yakakwana- (haina kubatira CHINHU) mazano angu kune avo vanobva kumahwindo, vanogona kutanga ne zorin 12 kana 9, yakafanana chaizvo nemahwindo, zvakare linux mint ine sinamoni desktop, linux deepin yakanaka uye yakapusa, kubuntu kune kukwezva kwayo, zvakare mune imwe laptop yandinayo yakashanda ne xubuntu, ini ndinoikurudzira, uye pakupedzisira elementary freya.
Ehezve, zvinoenderana nekugona kwekombuta yako, kumwe kugovera kweLinux kunogona kunonoka, kune izvi, lubuntu rinokurudzirwa kumakomputa ane zviwanikwa zvishoma.
kurasikirwa nekutya uye kutanga izvozvi, sezvaunosvika pakuzviziva iwe unojairira, uye maforamu achakubatsira iwe kuwana zvimwe, maererano neoffice automation, Linux ine LibreOffice 5 uye iri huru, ini ndatojaira uye ndicha kwete kuchinjira chero chinhu, uyezve kune akawanda mamwe mapurogiramu uye akafanana neaya anowanikwa mumawindo, iri yakawanda muhuwandu hukuru hwesarudzo uye nemhedzisiro yakanaka
Pindura kuna edgar
Ndiri maneja wenharaunda uye ini zvakare ndinoita dhijitari mishandirapamwe, ini ndoda kuyedza Linux sezvo ini ndichifunga kuti ndinogona kuwana maturusi akakosha anogona kushandiswa pabasa rangu sekugadzira dhatabhesi uye kubvisa maemail nenhamba dzerunhare kuitira zvinangwa zvepropaganda. UNOTI KURUDZIRAI NDEI ??
chinhu chaicho ndechekuti vanhu vakaremara, uye nditendei kuti vanogara nemufaro pasina kukosha kwekuti vanachiremba vadzosere kuona kwavo, kune rimwe divi Chrome OS haisi distro…. kune zvese zvakanaka kwazvo
Yakanyanya Yakanaka Chinyorwa, Kunyanya PaChengetedzo uye Kusazivikanwa,
1. Kali Yakanyanya Kuwanda KweKomputa Kuchengetedza Uye Kubiridzira
Uye mune yechitatu iwe unofanirwa kuisa XiaoPan OS kana Wifislax, chokwadi ndechekuti, ini handina kuyedza Wifislax asi neXiaoPan inoshanda kwandiri.
Chimwe Chinhu Kana Iwe Ukaisa Akaremara Ini Ndakafunga Chimwe Chinhu, Iwe Ungadai Wakaisa "Zviratidzo Matambudziko" Asi Zvakanaka Chinyorwa Chakanakisa.
Paive Pasina Ruvengo Kana Santoky Kana Wifislax Salud0s!
Daniel Villalobos akadaro
Yakanaka kwazvo posvo uye inobatsira. Ini ndiri mutsva kuLinux uye ini ndauya pano chaizvo ndichitsvaga ruzivo nezvazvo. Ini ndichatanga nekuyedza iwo akakurudzirwa evatangi, kunyangwe kuda kuziva kuchindikurudzira kuyedza vese vanobata-ruoko! Hahaha. Kutenda nekutumira
Pindura kuna Daniel Villalobos
Wifislax 4.11.1 yakabuda mushanduro yekugadzirisa
Conky, yakajeka kwazvo system yekutarisa